Wararka - Hubka Farsamada ee Aaladda otomaatiga ah Kacdoonka Geedi socodka
Muddo aan fogeyn ka hor, Zhengchida waxay aqoon-isweydaarsiga ku yeelatay xubno cusub, kuwaasoo la yimid wax-soo-saar tayo sare leh iyo tayo wanaagsan. Waxay yihiin Hubka Farsamada otomaatiga ah.
Mashruuca horumarinta mashiinada otomaatiga ah waxaa la bilaabay horaantii 2019. Koox injineero khibrad leh ayaa loo aasaasay koox ka shaqeysa mashruucan. Kooxda ayaa qaadatay waqti dheer in ay ku sameyso cilmi baarista iyo daraasad ay ka sameysay shirkado badan oo soo saara mashiinada iyo bandhigyada mashiinada. Injineerada u heellan waxay ku xireen tikniyoolajiyadda horumarsan geeddi-socodka soo saaridda daab cawska, ugu dambayntiina waxay yeesheen guul weyn oo shirkadda u horseedaysa sahlanaan iyo faa iidooyin badan, Hawlaha soo-saaridda soo jireenka ah, si loo sameeyo hal baalley, waxay adeegsan doontaa dhowr mashiin oo kala duwan. shaqaale kala duwan, sida mashiinka faaruqa, mashiinka feedhka, mashiinka wax lagu jaro ama wax lagu shiido, mashiinka sameynta iyo wixii la mid ah; laakiin iyadoo la kaashanayo Qalabka Farsamada Gacanta, dhammaan howlahaan waxaa lagu sameyn karaa hal mashiin hal mar.
Runtii taasi waa kacaan. Horumarka waa iska cadahay:
1. Waqti yar. Waxay soo gaabisay dhowr talaabo inay noqoto hal talaabo oo fudud. Ma aha oo kaliya waqtiga hawlgalka la gaabiyey, laakiin sidoo kale waqtiga gaadiidka ka socda aqoon isweydaarsiga ilaa mid kale.
Shaqada oo yaraata. Qaabkii hore, waxay ubaahantahay 3-4 shaqaale ah oo sameeya hal daab, halka hada kaliya hal shaqaale ku filan yahay, iyo dhamaan waxa ay tahay inuu sameeyo, ayaa isha ku haysa mashiinka si loola socdo socodka.
Tayada 3.Better Shaqooyinka Farsamada otomaatiga ah waxay ka fogaadaan qaladka ama weecashada ay sababi karto shaqooyinka gacanta. Waxay sare u qaadeysaa heerka saxda, saxnaanta iyo waxtarka waqtiga celceliska.
Qalabaynta otomaatiga ah waa isbeddelka horumarka warshadaha. Zhengchida ayaa raaci doonta isbeddelka, waxayna keeni doontaa ama qaabeyn doontaa mashiinno farsamo oo aad u horumarsan si loo hagaajiyo tayada iyo xakamaynta nidaamka.